DongFeng – AutoMyanmar
Posts tagged with: DongFeng
အထူးပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့အတူစောင့်ကြိုနေတဲ့ CarDB Auto Show Mandalay 2018!
မန္တလာသီရိအားကစားကွင်း မှာ မတ်လ ၃ ရက်နေ့ကနေ ၅ ရက်နေ့အထိကျင်းသွားမယ့်CarDB Auto Show Mandalay 2018 ဟာဆိုရင်တော့ ထူးခြားလှတဲ့ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေနဲ့ စောင့်ကြိုနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Auto Show ကျင်းပမယ့် ၃ ရက်ကနေ ၅ ရက်နေ့ ၂ ရက်တာကာလ ဆက်တိုက်ကို ကံစမ်းမဲဖောက်ပေးသွားမယ့် ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကံစမ်းမဲအတွက်ပါဝင်မယ့်ပစ္စည်းတွေကတော့ ဆိုင်ကယ် အသစ်စက်စက်, FNI အာမခံလုပ်ငန်းမှ ၁၀ သိန်းတန် အသက်အာမခံ Gift Voucher, Mi 5X လက်ကိုင်ဖုန်း, ၄ သိန်းတန် စိန်နဲ့မြ မွှေ့ယာအကောင်းစားကြီး၊ Kenso Air Con, Kenso Stabilizer, Polar Star GPS, Shell Advance Motor Cycle Engine […]
Chevrolet, DongFeng, Ford, Jaguar, local, Mitsubishi, Motor Show and Event, Nissan, Suzuki, Toyota
CarDB Auto Show 2018 မှာပြသသွားမယ့်ကားတွေကိုသိပြီးကြပြီလား ?
မတ်လ ၃ ရက်နေ့ကနေ ၅ ရက်နေ့အထိကျင်းပမယ့် CarDB Auto Show 2018 မှာတော့ Ford, Jaguar/Land Rover, Nissan, Mitsubishi, DongFeng, Suzuki, Chevrolet, Toyota, Yutong, KIA, Peugeot အစရှိတဲ့ ကားကုမ္ပဏီတွေက မိမိရဲ့ ကားမော်ဒယ်အသစ်ကလေးတွေကိုချပြမိတ်ဆက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Auto Show မှာပြသမယ့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကားမော်ဒယ်တွေကတော့ -Ford မှာဆိုရင် Everest နဲ့ Ranger Double Cab XLT -Nissan မှာဆိုရင် Sunny, Urvan, Navara -Chevrolet မှာဆိုရင် Trailblazer, Suburban, Malibu, Cruze -Toyota မှာဆိုရင် Vios, Corolla, Camry, Hilux […]
Chevrolet, DongFeng, Ford, Jaguar, Kia, local, Mitsubishi, Motor Show and Event, Nissan, Peugeot, Suzuki, Toyota, Yutong
မန္တလေးမြို့ကြီးမှာမကြာခင်ကျင်းပသွားတော့မယ့် CarsDB Auto Show 2018
မန္တလေးမြို့တော်ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ CarsDB Auto Show 2018 ကိုတော့ မတ်လ ၃ ရက်နေ့ကစပြီး ၅ ရက်နေ့အထိ ၃ ရက်တာကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်ကတော့ မနက် ၁၀ နာရီကနေ ည ၈ နာရီအထိဖြစ်ပြီး မန္တလေးသီရိအဆင့်မြင့်အားကစားကွင်းမှာ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာပါ။ ဒီအကြောင်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅ ရက်နေ့က Oriental House မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CarDB Auto Show မှာတော့ Ford, Jaguar, Nissan, Mitsubishi, DongFeng, Suzuki, Chevrolet, Toyota, Yutong, KIA, Peugeot တို့ရဲ့ မော်ဒယ်အသစ်ဆက်ဆက်ယာဉ်တွေကိုချပြသွားမှာဖြစ်ပြီး စမ်းသပ်မောင်းနှင်ခွင့်ပေးမယ့်အစီအစဉ်လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်မော်တော်ယာဉ်တွေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအပိုပစ္စည်းရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းတွေ၊ ဘဏ်နှင့် မော်တော်ယာဉ် အာမခံလုပ်ငန်းတွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ပြခန်းစုစုပေါင်းအရေအတွက် ၄၀ ကျော်ပါဝင်မယ်လို့လဲပြောကြားထားပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်မော်ဒယ်အသစ်တွေ […]